Uye anokunda ari ... - vanhu - Tamban RELAY
Uye uyo anokunda ... - vanhu
By TELES RELAY On Dec 19, 2019
(yakabatanidzwa) https://www.youtube.com/watch?v=1EszZi2yT54 (/ yakabatanidzwa)
Mushure memwedzi mitatu yezvipfeko zvemusango, kubviswa kwekupokana, dzimwe nguva kuita kwakakura uye chishuvo chinosiririsa chekudzoka kwaAlevi Levine, mwaka 17 we "Izwi" rakamuti aputuke Chipiri manheru.
Zvino pakupera kwemaawa maviri pakupera paNBC, iye oga muimbi akaona ...
Makorokoto edu ese @JakeHootMusic! Iwe nevamwe vese vekupedzisira munoshamisira mwaka uno. Ini handingamiriri kuti ndione kuti ramangwana rakamira sei imi mose#Izwi#TheVoiceFinale https://t.co/GwwtxkQAle
- Jacob Emery (@TheJacobEmery) 18 décembre 2019
Hoot, muimbi wenyika anga adzidziswa naKelly Clarkson, akarova Ricky Duran (Chikwata Blake Shelton) zita iri. Katie Kadan (Team John Legend) apedza wechitatu naRose Short (Team Gwen Stefani) apedza chechina.
Kwaive kukunda kwechitatu kwevarairidzi kunaClarkson, uyo akatanga kuhwina mwaka 14 nemakwikwi Brynn Cartelli, uye akazokunda mwaka 15 nemakwikwi Chevel Shepherd.
Kukunda kwaHoot, mugari wemakore makumi matatu nematatu ekuCookeville, Tennessee, hazvina kushamisa. Aive awana musiyano weavo vakawanda nhepfenyuro muunganidzwa (paApple Music) uye aigara achiburitsa zvinotyisa uye zvine chekuita kwakanaka. Clarkson, kunyangwe aipinda mushe, akamudaidza "maoko pasi, muimbi wepamusoro wekupedzisira".
Asi Hoot aifanira kukurira pfungwa dzekutanga asati azvimisa semuridzi we fan. Munguva yekuongorora mapofu, akashevedza mumwe chete murairidzi - Clarkson - kuti atore chigaro. Uye mumavhiki ekutanga, akawana mukurumbira wekuvepo pachinzvimbo chekunyara.
Hoot, zvakadaro, akave akadzikama uye achisimbisa sezvo mwaka yairamba ichienderera, uye kufukidzwa kwake kwemoyo kweEagles '"Desperado" kwakatanga panzvimbo paApple Music site. Boka rake revatsigiri vanofarira - nerudo vanozivikanwa se "Hooters" - rave simba rekuverengerwa naro.
Kukunda kwake kunoenderera mberi nekubudirira kunoshamisa kwevaimbi vemunyika - nevamiriri kubva kuSouth - pa "Izwi".
Hoot akaberekerwa kuTexas, asi vabereki vake vemamishinari vakatamisa mhuri kuDominican Republic aine makore 9. Achigara ikoko, akatanga kuimba nekutamba gitare apa achitaura Spanish zvakapusa. Pazera ramakore makumi maviri, akatamira kuTennessee kwaakatanga kuita makonsheni apo aipinda Tennessee Tech University semutambi wenhabvu.
Makumi maviri ekupedzisira neChitatu aive, senguva dzose, akazadzwa nemitambo nemazita makuru. Aimbove murairidzi, Jennifer Hudson akadzoka kuThe Voice neiyo Black Eyed Peas, Luke Combs, Lady Antebellum, Little Big Town, Dua Lipa uye akahwina 16 mwaka Maelyn.
TELES RELAY 21732 Posts 0 mashoko
MHD ANOGONA SEI KUPARIDZA? - VIDEO
Barça-Chaiyo: Zvirango zviviri zvakakanganikwa, kunyunyuta kwepamutemo kunowira - FOOT 01